Bandhiga kalluunka Somaliland - BBC Somali
Bandhiga kalluunka Somaliland
Image caption Bandhiga kalluunka Somaliland
Waxaa maanta ka furmay magaalada Hargeysa carwo lagu soo bandhigay wax soo saarka kalluunka ee xeebaha somaliland.
Waxaa ka soo qayb galay shirkado maxali u badan oo kalluunka ka soo jillaabta badda siiba xeebaha Berbera, Mayd, iyo Saylac.
Carwadan waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda kalluumeysiga Somaliland oo kaashaneysa hay'ado caalami ah.
Agaasimaha guud ee wasaaraddaasi kaluumaysiga Cabdi Gurey ayaa sheegay in ujeedadu tahay sidii loogu dhiirigelin lahaa dadka in ay kalluunka bartaan iyadoo Soomaalidu inta badan isticmaasho hilibka xoolaha.
Waxaa kaloo shalay lagu qabtay magaalada Berbera dabbaaldeg doonyaha soo saara kalluunka iyo sharikadaha kalluunka iyo dekedda berbera ay ku soo bandhigeen noocyada kalluunka laga soo saaro badda Somalilnd.
Carwadan maanta ka furantay Hargeysa ee kalluunka waxay soconeysaa saddex maalmood iyada oo dakuna saaka iibsanayeen kalluun kala nooc ah.